गुल्मीका कार्किले गरे भारतमा आत्महत्या, पछील्लो ६ महिनामा ३ जनाद्वारा आत्महत्या – Gulmiews
गुल्मीका कार्किले गरे भारतमा आत्महत्या, पछील्लो ६ महिनामा ३ जनाद्वारा आत्महत्या
नयाँ दिल्ली । गुल्मी जिल्ला हरेवा गाबिस बार्ड न ८ भेडिखाल्टा घर भै हाल नयाँ दिल्ली सड्गै जोडिएको गुड्गाँव को सेक्टर ४२ स्थित प्रोपर्टी डिलरको अफिसमा काम गर्दै आएका नर बहादुर कार्की का छोरा ३८ बर्षिय कृष्ण कार्कीले आफु कार्यरत अफिसको माथिल्लो तलामा स्थित बस्ने कोठामा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन ।
करिब डेढ साल देखी उक्त अफिसमा कार्यरत कार्की घर बिदा मा नेपाल गएर एहि महिनाको ५ तारिखका दिन गुड्गाँव फर्किएका थिए । दुई छोरी र एक छोराका बाबु कार्की ले मासिक नौ हजार तलब पाँउथे । “निकै बिस्वासिलो डिलर हो । म आफै भाईलाई उक्त प्रोपर्टी डिलरको मालिक सँग कुरा गराएर काममा लगाएको हुँ । राम्रै नोकरी गरिरहेको थियो । अफिसमा पनि सबैले प्यारो गर्थे । खै घर गएपछि केभो ? आउनासाथ यो दुर्दशा ? ” मृतकका दाजु रुद्र बहादुर कार्की ले भने । ” घटना मा प्रोपटी डिलर या कार्यरत क्षेत्रमा कसैको संलिप्तता न हामीले पाएका छौ न गुड्गाँव प्रहरी ले पाएको छ । तैपनि हाम्रो अफिस स्टापहरु सँग सोधपुछ चल्दै छ कसैको संलिप्तता पाए कार्यवाही प्रकृया अघि बढाउछौ ” घटनाबारे जानकारी दिदै गुल्मी भुर्तुड्ग सम्पर्क समिति भारत का अध्यक्ष टिका बहादुर कार्की ले भन्नुभयो। सधै जसो खुशमिजाज नै रहने मृतक कार्की घर बाट फर्किएपछि भने हल्का टेन्सनमा रहेको उनि सड्गै कार्यरत साथी हरुले बताउछन ।
“आवश्यक कागजी कारवाही र पोस्टमार्टम पछि लासको सदगदको लागि परिवार को जिम्मामा लगाएका छौ । घटनाको प्रकृति हेर्दा कसैको संलिप्तता देखिदैन । तैपनि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि सबै भन्न सकिन्छ । ” घटना बारे सोधिएको प्रश्न को जवाफ दिदै गुड्गाँव सेक्टर ४२ प्रहरी चौकीका ईन्चार्जले भने । मृतक कार्की कि जेठी छोरी १४ बर्ष र कान्छी छोरी १० बर्ष कि छिन भने छोरा ८ बर्षका छन । “उनि कार्यरत अफिसले स साना बालबच्चा हरुको मुख हेरेर भएपनि केहि सहयोग गर्छु भनेको छ । के गर्नु आफ्नो ज्यान त गयो गयो । ति अनाथहरु पनि बिचल्ली मा पारेर गयो । न त कहिल्यै अफिसको समस्या बतायो नत घरमा कुनै समस्या छ भन्यो के दुख आईलाग्यो मेरो भाई लाई एति ठुलो कदम उठाउन ” भक्कानिदै दाजु रुद्र ले भने । पछिल्लो पटक नयाँ दिल्ली तथा एनसिआरमा कार्यरत नेपाली हरुको आत्महत्या गर्ने क्रम बढिरहेको छ । पछिल्लो छ महिना भित्रैमा गुल्मीका तिन जना ले आत्महत्या गरिसकेका छन ।
गमला फुटाएको आरोपमा वकिलको पिटाई खाएपछि गुड्गाँव को डिएलएफमा गुल्मीका केशव गमालले आत्महत्या गरे भने आफ्नो भारतीय ब्वायफ्रेण्डसँग ठाकठुक परेपछि गुल्मी खड्ककोटकी सोनिया बस्यालले मृत्यु अँगालिन । अनि आज कृष्ण कार्की ले आफुलाई गुमाए । किन आफै सड्ग नै हार्दै छन प्रवासी नेपालीहरु ? के नेपालीहरुमा पनि महत्वाकांक्षा र घुस्सैल प्रबृति हावी हुदैछ ? के प्रवासी युवाहरुमा घरपरिवार बाट टाढा प्रवास मा एक्लोपन को समस्या निम्तदैछ ? या परिवारबाट आफ्ना ईच्छा आकाड्क्षा बढि थोपर्नुको परिणाम हो यो ? कुरो जे सुकै भएपनि यो बारे समयमै ध्यान पुर्याउन सबैको जरूरी छ ।